warkii.com » Rajkummar Rao oo dib u sameynaya filim Telugu ah kaasoo guul weyn soo hoyay… (Magaca filimka iyo xilliga la daawan doono)
Rajkummar Rao oo dib u sameynaya filim Telugu ah kaasoo guul weyn soo hoyay… (Magaca filimka iyo xilliga la daawan doono)
Jilaaga ka tirsan shirkadda Bollywood-ka ee Rajkummar Rao ayaa dib u sameynaya filimka lagu magacaabo HIT isagoo hindi ah, xilli filimkan uu natiijo wanaagsan ka sameeyay dhulweynaha Telugu.
HIT- oo laga soo gaabiyay Homicide Intervention Team – ayaa gudbinaya sheekada soo qabashada haweeney la la’yahay.
Isku daba-ridaha(Director) filimkan Dr.Sailesh Kolanu oo abaalmarinno badan ku xaabsaday sameynta mashruucan ayaa hadda doonaya inuu gacan ka geysto in la sameeyo isagoo Hindi ah.
Dr. Sailesh Kolanu ayaa doortay in filimkan noociisa Hindiga ah uu jilaa kaga dhigo aktarka Rajkummar Rao isagoo aaminsan inuu xiddigagan si wanaagsan kaga soo bixi karo doorka sheekada filimkan uu ku leeyahay ee ah sarkaalka booliska ah, waxaana isagoo arrintaas ka hadlaya uu yiri: “Marka ugu horreyso sheekada filimka HIT, waa sarkaal boolis ah kaasoo si joogto ah ula dagaallamaya dhacdooyinkiisii hore iyo kuwa markaas taagan. Sidaas darteed waa door dhib badan.
“Waxaan doonayay inaan u dhiibo jilaa sameyn kara doorkan mugdiga , sidoo kalena bandhiggiisa kusoo jiidan karo daawadayaasha.
“Waxaan dareemay inuu Raj kasoo bixi karo doorkaas, waxaanna daawanayay isaga tan iyo markii aan daawaday filimkii Shaitaan, waa jilaa heer sare ah wuxuuna waqti walba nagu cajab galinayay bandhiggiisa. Waxaan xiiseynayaa inaan mashruucan kala shaqeeyo Rajkummar Rao iyo Dil Raju Sir.” ayuu yiri Director-ka filimkan.
Rajkumar Rao ayaa isaguna dhankiisa sheegay in sheekada filimkan uu ka helay maadaama ay la xiriiro xaalado hadda ka jira dalka India, waxaana uu tilmaamay inuu aad ugu faraxsan yahay la shaqeynta Sailesh iyo filim soo saare Mr.Dil Raju.”
Shaqada filimkan ayaa goor dhow la billaabi doonaa, waxaana la rajeynayaa in la daawado sanadka 2021, iyadoo faahfaahinnada kale ee filimkan la xiriirta lagu dhawaaqi doono goordhow.
Previous articleMa Runbaa In Kajol Ilmo Kasoo Dhaceen Intii Ay Duubeysay Kabhi Khushi Kabhie Gham Sidaasna Ajay Ku Furi Lahaa?